Global Voices teny Malagasy » Fanapahankevitra 2016: Fandanjàna Fahavoazana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Novambra 2016 17:44 GMT 1	 · Mpanoratra Robert Valencia Nandika (en) i Georgia Popplewell, avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Etazonia, Kiobà, Kolombia, Meksika, Venezoela, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
“Tsy ho ao Etazonia ihany no ho tsapa ny fiantraikan'ny fahatongavan'i Trump eo amin'ny fitantanana an'i Etazonia, fa koa any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao, indrindra fa i Amerika Latina.” Graffiti politika ao Caracas. SARY : Erik Cleves Kristensen (CC BY 2.0)
Ny marainan'ny 9 Novambra no nanamarika ny haavo ambony indrindra teo amin'ireo volana 18 nanaovana ny hazakazaka nahavaky tratra ho filohan'i Etazonia, nahitàna an'i Donald Trump nivoaka nandresy tamin'ny isa 279 tamin'ireo mpifidy vaventy ary maherin'ny 59 tapitrisa tamin'ny fitambaran'ny vatom-pifidianana. Arakaraky ny naha-niha-nanakaiky ny fiafaran'ity toko mangidy amin'ny fifaninanana ho ao amin'ny Trano Fotsy ity, tsy maintsy mijery izay mety ho entin'ny efatra taona hoavy i Etazonia ankehitriny. Kanefa hatreto aloha, ny fanontaniana tena mampiasa loha ny ankamaroan'ireo any Amerika dia: fa inona no dia nitondra ity firenena ity ho amin'izao toerana izao?
Mpandalina marobe no nanondro ny fizarazaràna lalina ara-poko sy sosialy ary ara-toekarena izay nitambesatra tamin'i Etazonia efa nanomboka tany amin'ny nananganana azy ho repoblika, 238 taona lasa izay. Ilay fanavakavahana ara-poko nandrandrain'ny maro fa hihena taorian'ny nahalanian'i Barack Obama ho filoha tamin'ny 2008, raha ny marina dia ny mifanohitra amin'izany no nisy : ny fitomboan'ny herisetra ataon'ny polisy amin'ireo vondrom-piarahamonina tsy fotsy hoditra, ary ny fandroahana faobe an'ireo mpifindra monina miteny Espaniola no anisan'izay akaiky indrindra tamin'ny fisehoan'io.
Vao mainka nanamafy ny toedraharaha ny zavanisy hoe rehefa nahavita niarina avy tamin'ilay krizy ara-bola tamin'ny 2008 ny toekarena Amerikàna, tsy tonga tany amin'ny sehatra rehetra tany amin'ny vahoaka ilay fiarenan'ny toekarena, ary indrindra tsy natao ho an'ireo fotsy tantsaha mahantra. Nanome tany lonaka hitsimohan'ireo karazan'olona toa an'i Donald Trump sy Bernie Sanders io, ary koa mba hahazoany vàhana tamin'ireo fifidianana savaranonando tany amin'ny antokon'izy ireo tsirairay avy. Samy nampanantena ireo kandidà roa ireo fa hanova ilay endrika politika tsy misy fiovàny, miaraka amin'ny fampiasàn'i Trump tetikady fampitahorana mba hampiakatra afo ireo Repoblikàna mpifidy, ohatra, taminy nanosohany hevitra hoe ireo Meksikàna no mpanolana, mpanao heloka bevava ary mpanelanelana amin'ny varotra zava-mahadomelina miditra mankao Etazonia Tofoka tamin'ny politika nentimpaharazana ireo Repoblikàna ka nifidy an'i Trump, noho ny hoe izy, tsy avy ao anatin'ny milina politikan'i Washington, no afaka mety ho olon'ny tena fanovàna.
Nitàna anjara andraikitra rahateo koa ny fianakaviana mpidongy toerana politika, na “establishment”, tamin'ny fahaterahan'ny toedraharaha misy amin'izao fotoana izao. Ny fitarihana ny antoko Demaokraty — nampian'ireo solontena ambony  sy ny lazaina fa lalao ratsy nataon'ny ampahany tamin'ny Kaomity Nasionaly Demoakraty nandritry ny fifidianana savaranonando izay nanome tombony an'i Hillary Clinton — nisompatra ny vintan'i Sanders tsy hahazo bàhana tsara ho lasa safidy atolotry ny antoko demaokraty. Tetsy amin'ny lafiny ilany, ny “establishment” Repoblikàna, ambany fitarihan'ny fianakaviana Bush, tsy nahavita nanangana fanamby azo ianteherana tamin'ny kandidà iray, izay ny fampielezankeviny dia tsy nisy afa-tsy fanevatevàna, fankahalàna vehivavy, tsy fitiavana vahiny ary politika mampihomehy toy ny fananganana rindrina iray mitomandavana manaraka ny sisintany manasaraka an'i Meksika sy Etazonia. Samy afaka nanatsahatra ny firodorodon'ilay voaiben'ny fanorenan-trano daholo, na i John Kasich, na Ted Cruz na Marco Rubio— ity farany izay heverina ho nanavotra ny antoko Repoblikàna tamin'ny fotoan'andro.
Nitàna toerana lehibe tamin'ny fisafidianana ireo kandidàn'ny antoko roa ihany koa ny mpampahalàla vaovao. Nosarontsaronana tamin'ny hoe tsy fitanilàna, hitan'ireo fantsom-pahitalavitra fa sarotra ihany ny handresy ny angolan'i Trump. Ny vokany dia taona iray izay ny honohono, ny tombatombana ary ny lainga nafafin'i Trump sy ireo mpiaramiasa aminy no naka ny toeran'ny antontanisa, ny zavamisy ary ny fahamarinana. Ireo mpampahalàla vaovao ireo ihany no niafara tamin'ny fanadiovana, tsy tamin'ny nahim-pon'izy ireo, ny sarin'ny Trump, rehefa nanome fahafahana manao izany ho an'ilay kandidà tamin'ny alàlan'ny fanasàna azy ho vahiny manokana tao amin'ireo seho mampihomehy malaza, toy ny Saturday Night Live sy ny The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, na teo aza ny fandàvana mafy ny hisian'ireny fisehoany ireny. Ho an'ny maro, navadik'ireo media ho toy ny ara-dalàna ireo kabary adaladala nataon'i Trump. Noho i Trump sy ireo faniratsiràna nataony ho an'ny mpifanandrina taminy, ireo fantsom-pahitalavitra toy ny CNN dia nihanoka ny fiakaran'ny tahan'ny mpanaraka azy tonga tamin'ny avo indrindra. Kanefa na dia nomena fotoana azony nivalamparana nidirana nivantana tamin'ny fahitalavitra aza, notohizan'i Trump hatrany ny famelezany ny media, tamin'ny fisisihana nilazàny hoe tsy an-drariny sy tsy nitovy ny nitondràna azy sy ny fampielezankeviny.
Tsy ho ao Etazonia ihany no ho tsapa ny fiantraikan'ny fahatongavan'i Trump eo amin'ny fitantanana an'i Etazonia, fa koa any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao, indrindra fa i Amerika Latina. Toa toy ny hitsimbadika ireo fandrosoana ara-politika azo fony fitondràn'i Obama , satria nampanantena i Trump ny hanafoana ny fifanarahana nifanaovana tamin'i Kiobà ary hamerina htady marimaritra momba ireo fifanaraham-barotra malalaka izay azo antoka fa hahakitika an'i Kolombia, Meksika, Shily ary Panamà, ankoatra ireo hafa. Mety hijery an'i Venezoelà ihany koa i Trump, raha tsy hilaza afa-tsy ny hoe manana izay heveriny momba an'i Iràna sy Korea Avaratra izy, izay hahita Trump taitaitra hanatrika azy ireo, mahavita ny handefa fanafihana nokleary na hamarana ireo fifanekena efa sarotra dia sarotra vao vita nandritra ireo fifampiresahana momba ny nokleary.
Taorian'ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana, izay nahafanina tokoa, ny hany zavatra sisa tavela ho ataon'i Etazonia dia ny mandanja ny fahavoazany. Somary mivoaka kely amin'ny fanontaniana hoe iza no nandresy tamin'ny fifidianana, mbola manindrona lavitra noho ny hatrizay ny olana amin'ny maha-mpikambana anaty antoko ao Washington, noho ny fisian'ny “iron triangle ” (telozoro vy) mampitambatra ireo tombontsoa politika izay mitantana ny hoavin'ny firenena.
Ho ilain'ilay filoha voafidy ny hiatrika, tsy ireo fanamby toy ny fanavaozana ny resaka fahasalamana na fisafidianana Fitsaràna Tampony fotsiny, fa koa ny tsindry ilaina mba hanamaivanana ny fanaintainana mianjady amin'ny firenena noho ny fahalaniany. Ho taona maro anefa no hitatazana ny vokatr'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/17/91858/
 solontena ambony: https://en.wikipedia.org/wiki/Superdelegate
 iron triangle: https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_triangle_(US_politics)